ကိရိယာများ - Come4Buy eShop
$ 9.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ - $ 38.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Drain Rack Folding Kitchen Sink...
မှာစတင်ခြင်း $ 17.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
မီးဖိုချောင်သုံးကိရိယာများ Drain Rack Folding Kitchen Sink စင် အသီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပန်းကန်များ ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ ရေစစ်စင် သိုလှောင်မှု Rack 304 Stainless Steel အရောင်- အနက်ရောင်၊ နှင်းဆီနီ၊ ပစ္စည်း- Stainless steel ပုံစံ- American...
နှင်းဆီအနီ/(10ပြွန်) 37X20cm နှင်းဆီအနီ/(10ပြွန်) 47X20cm နှင်းဆီအနီ/(12ပြွန်) 37X23cm နှင်းဆီအနီ/(12ပြွန်) 47X23cm နှင်းဆီအနီ/(15ပြွန်) 37X30cm နှင်းဆီအနီ/(15ပြွန်) 47X30cm နှင်းဆီအနီ/(18ပြွန်) 37X35cm နှင်းဆီအနီ/(18ပြွန်) 47X35cm နှင်းဆီအနီ/(20ပြွန်) 37X40cm နှင်းဆီအနီ/(20ပြွန်) 47X40cm နှင်းဆီအနီ/(20ပြွန်) 54X40cm အနက်ရောင်/(10ပြွန်) 37X20cm အနက်ရောင်/(10ပြွန်) 47X20cm အနက်ရောင်/(12ပြွန်) 37X23cm အနက်ရောင်/(12ပြွန်) 47X23cm အနက်ရောင်/(15ပြွန်) 37X30cm အနက်ရောင်/(15ပြွန်) 47X30cm အနက်ရောင်/(18ပြွန်) 37X35cm အနက်ရောင်/(18ပြွန်) 47X35cm အနက်ရောင်/(20ပြွန်) 37X40cm အနက်ရောင်/(20ပြွန်) 47X40cm အနက်ရောင်/(20ပြွန်) 54X40cm ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
အာလူးကြော်စက် Stainless Steel...
$ 27.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 58.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Potato Chipper အာလူး Chipper Stainless Steel Fries Cutter အိမ်သုံး အာလူးဖြတ်စက် Manual Cutter လုပ်ငန်းသုံး သခွားသီး အန်စာတုံး Dicing Machine Potato Chipper Lakeland အရောင်- ဖြတ်တောက်ဖြတ်စက် + အရောင်ကွက် Cutter Size :...
Steel Fries Cutter ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Transparent Double-Sided Adhesive Nano Strong...
မှာစတင်ခြင်း $ 9.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Nano Strong sticky Tape Transparent Double-Sided Adhesive Nano Strong sticky Tape Removable Washable Feature- Washable ဖြစ်ပြီး အကြိမ် 600 ကျော် ပြန်သုံးနိုင်သည်။ သံမှိုမပါဘဲ သင့်အိမ်ကို အလှဆင်ပါ၊ တည်ငြိမ်ပြီး...
100 *3* 0.1cm 200 *3* 0.1cm 300 *3* 0.1cm 500 *3* 0.1cm 100 *3* 0.2cm 200 *3* 0.2cm 300 *3* 0.2cm 500 *3* 0.2cm ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
6pcs ပလပ်စတစ်ဖိနပ်သေတ္တာ စီစဉ်သူ...
ပလပ်စတစ်ဖိနပ်ဘောက်စ်၏ ထူးခြားချက်များ- 1. သင့်ဖိနပ်သေတ္တာကို သပ်ရပ်စွာ စည်းပါ။ ထိုဖိနပ်သေတ္တာများသည် အပေါ်နှင့်ဘေးရှိ သေတ္တာနှင့်အတူ လော့ခ်ချသည့် အင်္ဂါရပ်တဘ်များဖြစ်သည်။ ဒါက သေတ္တာတွေကို...
S-White S-Pink S-Green L-White L-အပြာ L-Green ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
အစားအသောက် ဆီလီကွန်6ခု အစုံ...
ထူးခြားချက်- 1.6Pcs/Set မီးဖိုချောင်ဆီလီကွန်ကာဗာ။ မတူညီသောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက် ဆန့်ထုတ်နိုင်သည်။ 2.Silicon ပစ္စည်း။ BPA အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 3.မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။အစားအစာများကို လတ်ဆတ်စွာထားပါ။ 4. ပြင်းထန်သောစုပ်ယူမှု၊ ယိုစိမ့်မှု။ အသေးစိတ်အချက်များ-...
အဖြူရောင်6Pcs 1 Set / 4.5-----18.5cm အဖြူရောင်6Pcs 1 Set / 6.5------21cm ပန်းရောင်6Pcs 1 Set / 4.5-----18.5cm ပန်းရောင်6Pcs 1 Set / 6.5------21cm အဝါရောင်6Pcs 1 Set / 4.5-----18.5cm အဝါရောင်6Pcs 1 Set / 6.5------21cm အပြာရောင်6Pcs 1 Set / 4.5-----18.5cm အပြာရောင်6Pcs 1 Set / 6.5------21cm အစိမ်းရောင်6Pcs 1 Set / 4.5-----18.5cm ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
တစ်ခါသုံးလက်အိတ် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ပလပ်စတစ်လက်အိတ်...
တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်လက်အိတ်များ အင်္ဂါရပ်များ- တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်လက်အိတ်များသည် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုရှိပြီး သင့်လက်များကို အမှာစာများနှင့် အညစ်အကြေးများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ စားသောက်ဆိုင်သုံး၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု နှင့် ထုပ်ပိုးမှု၊ အိမ်မီးဖိုချောင်သုံး၊
300Pcs 500Pcs ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
3PCS Transparent Safety Face Shield...
$ 16.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 25.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
3PCS Transparent Safety Face Shield Mask 3pcs။ ပြင်ပမှ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေး မျက်နှာဖုံးအတွက် ဖုန်မှုန့် ဆန့်ကျင်သည့် မျက်မှန် Mask 1. လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော အမြှုပ်ထွက်သည့် ဒီဇိုင်းကို...
အပြာ - ၃ ချပ်။ ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
$ 38.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 46.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
မီးဖိုချောင်သုံး Mandoline Slicer Mandoline လှီးဖြတ်ခြင်းကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများကို လျင်မြန်စွာ၊ တိကျစွာနှင့် (အကောင်းဆုံး) ဘေးကင်းစွာ လှီးဖြတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဓါးသွားကိုဖြတ်ပြီး ပစ္စည်းကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် လျှောချလိုက်ရုံပါပဲ...
$ 36.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 42.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Spiral Cutter Potato Spiral Cutter5Blade Vegetable Spiralizer Folding Veggie Pasta Spaghetti Potato Spiral Vegetable Cutter Zucchini Slicer Feature : ပေါ့ပါးပြီး ကျစ်လစ်ပေမယ့် မတူညီတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစွာအတွက် အလုပ်လုပ်ပါတယ်...
ကြက်သွန်နီ လက်ဆွဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက်လှီးဖြတ်...
$ 22.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 29.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
မီးဖိုချောင်သုံး ကိရိယာ- လက်ဆွဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက်လှီးဖြတ် ကြက်သွန်နီ Garilc အာလူးအသား ဟင်းသီးဟင်းရွက် လှီးဖြတ်သည့် အစားအစာ လှီးဖြတ်သည့် သံမဏိဓားပြား Mincer မီးဖိုချောင်သုံး ကိရိယာတစ်ခု၊ ဆွဲရလွယ်ကူသော ဓား ၁၆ ချောင်းနှင့် ညီမျှသော ပေါ့ပါးကျစ်လျစ်သော၊...
Kitchen Safe Mask Anti Oil...
မှာစတင်ခြင်း $ 11.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ပစ္စည်း : ပလတ်စတစ် အရွယ်အစား : 19CM*22CM အရောင် : အပြာ၊ အစိမ်း၊ နှင်းဆီ အနီရောင် ပါ၀င်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ : 1 x Anti-fog နှင့် Oil Splash Mask ဆက်စပ်ပစ္စည်း အမျိုးအစား : အဖုံးများ Specification : <1 ကီလိုဂရမ် အသုံးပြုမှု : တစ်ကိုယ်ရေလျှော်ခြင်း/ သန့်ရှင်းရေး/ စောင့်ရှောက်မှု ပစ္စည်း : ပလပ်စတစ် လုပ်ဆောင်ချက် : ဖုန်မှုန့် အကာအကွယ် ...
L.Blue-2pcs. ပြာသော ကြည်လင်သော စိမ်းလန်းသော ပန်းရောင် ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Camping Kit ပလာယာ ဓားအသေး...
$ 16.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 21.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Camping Kit Pliers ဓားအသေးစား PortableALLALL IN ONE- ဘက်စုံသုံးကိရိယာ Phillips ဝက်အူလှည့် ဓားစော Blade Needle Nose Ploers Pipe Grip Pliers Cable Cutters Quick Release Clip Small Portable...